Fallanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Caawa Group B Tartanka Euro 2016 Ku Dhexmaraya Xulalka Slovakia Iyo England | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Fallanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Caawa Group B Tartanka Euro 2016 Ku Dhexmaraya Xulalka Slovakia Iyo England
Fallanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Caawa Group B Tartanka Euro 2016 Ku Dhexmaraya Xulalka Slovakia Iyo England
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-06-16 11:04 AM Labada xul ee England iyo Slovakia ayaa labaduba isha ku haya inay guul gaaraan kulankooda dhexmari doona caawa oo Isniin ah kaasoo ka tirsan ciyaaraha wareega seddaxaad ee Group B tartanka Euro 2016, ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka Stade Geoffroy Guichard ee magaalada Saint-Etienne maadaama ay taasi ka caawin karto inay si toos ah ugu soo baxaan wareega 16ka Euro 2016.
Xulalka: Slovakia vs .England
Garoonka: Stade Geoffroy Guichard
England ayaa guul soo daahday oo soo kabasho leh ka gaartay xulka Wales iyadoo uu goolka guusha u dhaliyey Daniel Sturridge ka dib markii ay Three Lions barbardhac 1-1 ah oo ay la galeen xulka Russia ay ku furteen tartankaan.
England ayaa ciyaarta looga hogaaminayey laad xor ah oo uu daqiiqadii 40aad ee ciyaarta dhaliyey Gareth Bale. Laakiin tababare Roy Hodgson ayaa sameeyey laba bedel oo dahabi ah isagoo ciyaarta ka saaray Raheem Sterling iyo Harry Kane wuxuuna keenay Jamie Vardy iyo Daniel Sturridge kuwaas oo kala dhaliyey goolka barbardhac iyo midka guusha.
Dhanka kale, Slovakia ayaa guusheedii ugu horreeyey abid ka gaartay tartankaan ay ku cusub tahay ee European Championships ka dib markii ay 2-1 uga badiyeen xulka Russia. Waxayna ka mahdinayaan qaab ciyaareed ilqabad leh oo uu soo bandhigay Marek Hamsik, kaasoo caawiye ka ahaa goolkii furitaanka ee Vladimir Weiss ka hor inta uusan qudhiisu shabaqa soo taaban ka hor waqtigii nasashada ee ciyaarta.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo uu guushaas gaaray xulka Slovakia hadana cadaadis xoogan ayaa la saaray qeybtii labaad iyadoo fursado cajiib ah ay abuureen xulka Russia balse si wanaagsan ayey u difaactameen qeybtii labaad taasoo ka caawisay inay rajo wanaagsan ka yeeshaan usoo bixitaanka wareega 16ka ee tartankaan.
Xulka England ayaa haatan ugu sarreeya Group B waxayna leeyihiin afar dhibcood, halka Wales iyo Slovakia oo kusoo xigga ay leeyihiin min seddax dhibcood, wax kasta ayaana dhici kara ciyaarta ugu dambeysa safkaan iyadoo uu si aad ah u furan yahay safkaan Group B.
Tababaraha xulka Slovakia Norbert Gyombér ayaa arka xulkiisa oo aan qabin wax dhaawacyo ah oo ay ka welwelaan ka hor kulankaan ka di markii uu Jan Kozak kasoo bogsaday dhaawac yar mana jiraan ciyaartooy ka ganaaxan ka hor kulankaan. Waxaana la filayaa inuu garoonka kusoo galo isla shaxdii uu guusha uga gaaray xulka Russia.
Dhanka kale xulka England, Harry Kane iyo Raheem Sterling ayaa la filayaa inay keydka kusoo bilowdaan kulankaan waxaana la filayaa inay ciyaartaan weerarka Three Lions hogaamiyaan xiddigaha Jamie Vardy iyo Daniel Sturridge iyagoo guul u baahan kulankaan ay wajahayaan xulka Slovakia.
Jack Wilshere ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu kusoo bilowdo kulankiisii ugu horreeyey ee Euro 2016 isagoo booska kala baxaya Adam Lallana. Tababare Hodgson ayaana ku qasbanaan doona inuu shaxdiisa isbedel ku sameeyo kulankaan waxaana la filayaa inuu ciyaaro shax 4-3-1-2 ah.
Bandhiggii goolhaye Joe Hart ciyaartii ay wajaheen xulka Wales ayaa sidoo kale aad loo dhaleeceeyey ka dib markii uu Bale ka dhaliyey laad xor ah oo uu 35 yards kasoo laaday, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inuu kulankaan markale ilaaliyo shabaqa Ingiriiska.
Xulalka England iyo Slovakia ayaa kulmay keliya seddax jeer, Three Lions ayaana rikoor boqolkiiba 100 ah ka heysata xulka Slovakia ka dib markii ay ka badisay dhammaan seddax kulan oo ay foodda isdareen.
Markii ugu dambeysay ee ay labadaan xul kulmeen waxay foodda isku dareen ciyaar saaxiibnimo ah bishii March 2009kii ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Wembley Stadium, Xulkii England ee tababare Fabio Capello ayaana 4-0 ku badiyey ciyaartaas, iyadoo kabtanka haatan Wayne Rooney uu dhaliyey laba ka mid ah goolashaas.
Labada ciyaar ee kale waxay xulalkaani ku kulmeen isreebreebkii tartankii Euro 2004, England ayaana minan iyo martiba ku garaacday xulka Slovakia, waxaana xusid mudan inay labadaas kulanba ku badisay natiijo isku mid ah oo 2-1 ah.
SHAXDA MACQUULKA AH EE KULANKAAN
England: (4-3-1-2): Hart – Bertrand, Cahill, Smalling, Clyne– Dier, Wilshere, Henderson– Lallana – Sturridge, Vardy.